Wafdi hor dhac u ah Wafdi heer Wasiiro oo maanta gaaray Magaalada Baydhabo Janaay. – idalenews.com
Wafdi hor dhac u ah Wafdi heer Wasiiro oo maanta gaaray Magaalada Baydhabo Janaay.
Waxaa maanta garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo Janaay ee xarunta gobalka Baay ka degay wafdi uu hogaaminaayo Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Aadan Madoobe.
Wafdigaan oo ka koobnaa xildhibaano iyo siyaasiyiin ayaa waxaa si diiran garoonka diyaaradaha International Shati gudud Airport ugu soo dhaweeyay Maamulka gobalka Baay iyo kan Magaalada Baydhabo iyo qaar ka mid ah Golaha Aqalka sare ee Dowlad gobaleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Wafdiga Xildhibaan Adan Madoobe ayaa loo gelbiyay Xarunta ADC halkaasi oo ay ka qeyb galeen kulan maanta xarunta ADC lagu caleemo saarayay labada gudoomiye ku xigeeno ee Golaha Guurtida Dowlada K/galbeed.
Imaatinka Wafdigaan maanta soo gaaray Baydhabo janaay ayaa ku soo beegmaysa xili maalmaha soo socda la filayo wafdi heer Waziiro ah iney soo gaaraan Magaalada Baydhabo Janaay si ay goob joog uga noqdaan Doorashada Madaxweyne ee Dowlad Gobaleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhawaan la dooran doono.
Qarax ka dhacay afaafka hore ee Airport Muqdisho ka dhacey & Alshabaab oo sheegtay Masuuliyada Weerarkaas